रोमियो एण्ड मुनाको पहिलो पब्लिसिटी नै चिप दुई केटीलाई दिउँसै नंग्याईयो, कस्तो होला फिल्म ? (भिडियो सहित)FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
रोमियो एण्ड मुनाको पहिलो पब्लिसिटी नै चिप
दुई केटीलाई दिउँसै नंग्याईयो, कस्तो होला फिल्म ? (भिडियो सहित)
फिल्मी फण्डा । फिल्म रोमियो एण्ड मुनाले राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि पहिलो प्रचार सामाग्री स्वरुप एउटा गीत सार्वजनिक गरिएको छ । तर पहिलो पब्लिसिटी नै चिप अर्थात सस्तो प्रचारबाजीको लागि फिल्मका टिमले सस्तो काण्ड रचेका छन् । फिल्मको गीत रिलिज कार्यक्रममा दिउँसै दुई नेपाली केटीलाई फिल्मका निर्माण टिम र नायक विनय श्रेष्ठले नंग्याईएको हो । फिल्मको स्याण्डविच बोलको गीत सार्वजनिक गर्न केही पारश्रमिक तिरेर दुई युवतीलाई अर्धनग्न अवस्थामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
पिएनजि पिक्चर्स र भि मोशन पिक्चर्सले निर्माण गरेको फिल्म रोमियो एण्ड मुनाको यो किसीमको पब्लिसिटीले फिल्मलाई पक्कै नराम्रो असर पुग्नेछ । यस किसीमको फिल्मको प्रचारले नेपाली फिल्मी क्षेत्र कता उन्मूख हुदैछ भने पनि बुझ्न सहज हुन्छ । केही मेकरहरुले फिल्मलाई आधुनिक शैलीतिर लान खोजिएता पनि नेपाली दर्शकको लागि फिल्म निर्माण गरेपछि नेपाली समाज र नेपाली दर्शकको मनोभावलाई बुझ्न नसक्नु यसको कारक हो भन्दा फरक नपर्ला ।
हुन त नेपाली समाजका केही वर्गका दर्शकहरु यो अवस्था नपुगेका होईनन् । तर खुल्ला रुपमा भने नेपाली समाजका कुनै पनि वर्गका दर्शकहरु यो अवस्थामा पुगेका पक्कै छैनन् । एडल्ट फिल्ममा यो किसिमको सिन तथा गीतहरु राख्नु वा राख्दै आएको यो पहिलो पटक भने होईन । तर पब्लिसिटीकै लागि भनेर यस्तो खालको सस्तो काण्ड रच्नुले फिल्मका निर्माण टिमको सोच र फिल्म कस्तो बनेको छ भने अनुमान लगाउन सकिन्छ । भलै यो फिल्मको गीतले सामाजिक सञ्जालमा दर्शकको क्लिक त पाउँला सँगसँगै गालि र ताली कति पाउने हो त्यो पनि केही दिनमै देखिनेछ । विशेषत पछिल्लो समय हराउँदै गईरहेका नायक विनयलाई यस गितले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर गर्न सक्नेछ । फिल्म रोमियो एण्ड मुनालाई नरेश कुमार केसीले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा विनयको अलवा श्रृष्टि श्रेष्ठ, प्रज्वल सुजल गिरी लगायतको पनि मूख्य भुमिका रहेको छ ।